Igbe akara chọrọ ka mbinye aka eletrik dị mfe karịa mgbe ọ bụla
Nnukwu igwe ojii dị na ya, Igbe, ewebatala ya na ahịa mbinye aka elektrọnik, ka ọ na-achọ ime ka azụmahịa dị mfe. Igbe ụlọ ọrụ Box Box na-achọ iji mee ka asambodo akwụkwọ dị n'ịntanetị dị mfe, ...
Need chọrọ ngwa ọrụ UI / UX? Lebe anya karịa Mockitt
Workingrụ ọrụ na imepụta UI / UX nwere ike bụrụ ihe nkoropụ n'ihi oke mgbagwoju anya ya na ihe isi ike nke ịnwa ịmekọrịta na ọtụtụ mmadụ n'otu ọrụ n'otu oge. Otu ụzọ kachasị mma iji merie ihe mgbochi ndị a bụ iji ngwa ọrụ ...
Microsoft 365 agakwaghị akwado Internet Explorer 11 na ụbọchị ole na ole
Microsoft na-adụ ndị ahịa ya ọdụ na ngwa na ọrụ ndị mejupụtara Microsoft 365 agaghịzi adakọ na Internet Explorer 11 malite ọnwa na-abịa. Microsoft 365 agakwaghị akwado ihe nchọgharị ahụ maka August 17 na ...
Google Fixes Nightmare Chrome OS Connection Error
Google kwuru na ọ doziri ahụhụ Chrome OS nke na-egbochi ụfọdụ ndị ọrụ ịbanye na ngwaọrụ Chromebook ha. Okwu a, achọtara na Chrome OS mbipute 91.0.4472.165, na-egbochi ndị ọrụ ịnweta ngwaọrụ ha n'ihi ...
Ọ bụrụ na Windows 11 chọrọ ịsọ mpi na iOS na gam akporo, ọ na-eme ya
Mgbe Windows 11 bidoro mgbe afọ a gachara, ọ ga-eweta Storelọ Ahịa Microsoft echegharịrị, mana ọ dịka ọ ga-adị ụfọdụ nnabata nnabata na atụmatụ ọhụụ, ọ dịka Microsoft enweghị ike ịchọpụta ihe na-eme ya nke ọma. Site na ndị asọmpi gị. ....
Nke a bụ otú Grid Studio si eweta ọfụma nke Apple, Nintendo, na Sony na mgbidi ya
N'afọ gara aga, otu ụlọ ọrụ a na-akpọ Grid Studio jiri ịhụnanya kewaa ụfọdụ ngwaọrụ wee debe ha na foto maka ndị ahịa ha ga-ekowe n'ụlọ ha. Nostalgia bụ ihe dị ike, nke ahụ gụnyekwara ngwaọrụ anyị ji kwa ụbọchị, tupu ...